WARBIXIN: Waa Kuwan SHANTA Boos Ee Uu Xavi Doonayo In Barcelona Laga Soo Xoojiyo Haddii Uu Macalinka Kooxda Noqdo - Laacib
WARBIXIN: Waa Kuwan SHANTA Boos Ee Uu Xavi Doonayo In Barcelona Laga Soo Xoojiyo Haddii Uu Macalinka Kooxda Noqdo
Tababaraha lala xidhiidhinayo shaqada kooxdiisii ciyaartoynimo ee Xavi Hernandez ayaa la sheegayaa inuu durba sii calaamadsaday boosaska uu doonayo inuu kooxda ka xoojiyo haddiiba uu jagada Camp Nou la wareego.
Barcelona ayaa hadda booska sagaalaad ka joogta kala sarreynta horyaalka La Liga kaddib durba saddex bar-bardhac iyo hal guuldarro oo ay lasoo kulantay toddoba kulan oo ay ciyaartay.
Dhinaca kale Blaugrana ayaa qaab argagax leh ku bilaabatay Champions League xilli ciyaareedkan, laba kulan oo ay ilaa haatan ciyaareen ayay laba guuldarro oo min 3-0 ah lasoo kulmeen.
Kaddib bilawgaas liita, xogo laga helayo dalka Spain ayaa booska tababarenimo oo uu Ronald Koeman culays weyni ku saaran yahay la xidhiidhinaya Xavi Hernandez oo hadda tababare u ah kooxda ree Qatar ee Al Sadd.
Wargeyska El Nacional ayaa sii xusay shan boos oo uu Xavi doonayo in ciyaartoy cusub loo keeno haddiiba uu tababare u noqdo kooxda walow aan la magacaabin ciyaaryahanada uu u doonayo doorarkaas.
Ugu horreynba booska koowaad ee uu Xavi doonayo ayaa ah khad dhexe oo hal abuur leh (No.10), intaas waxa dheer oo uu doonayaa laba garab daafac oo midkood boosas badan ka ciyaari karo sida Sergi Roberto midka labaadna daafacashadiisu adag tahay.
Sidoo kale Hernandez ayaa doonaya garab weerar ee goysmada ku fiican isla markaana dhaafi kara daafacyada iyo waliba weeraryahan dhexe oo gool dhaliye lagu tashan karo ah.